Ogaden News Agency (ONA) – Dawlad Horumartay Dadkeedu Ma Qashinkay Cunaan? – By Hassan Moalin
Dawlad Horumartay Dadkeedu Ma Qashinkay Cunaan? – By Hassan Moalin
Xafiisyada suuqa weyn ku dhex leh dunida 3xaad waxaa ka mid ah kuwa u sameeya sumcadda xukuumadaha cadaadiska iyo xadgudubka ku dhisan. Xafiisyadaasi waxay siwalba isugu dayaan inay dawladaasi ugu raadiyaan sidii mucaawanada la siiyo loogu sii kordhin lahaa, taasoo ay ku leeyihiin Dalaal (Commission) xoogan. Itobiya waxay ugu horeysa dawladaha ay suuqa fiican ka heleen xafiisyadaasi. Waxyaabaha ay ka iibiyeen caalamka waxaa ugu horeeya inay Itobiya noqotay dawladaha ugu sareeya Afrika qiimaha Horumarka sanadlaha ah. Aqoonyahana badan oo ku xeeldheer aqoonta dhaqaalaha ayaa wax ka qoray macnaha Horumar iyo miisaanka la adeegsan karo marka la qiimaynayo dal inuu Horumar samaynayo iyo inkale.
Maqaalkan uu nala wadaagay Qoraaga Mudane Xassan Macallin oo ah Madaxa Xafiiska Arimaha Itoobiya ee Hogaanka Arimaha Dibbada ee JWXO (HAD), wuxuu baadhitaan dheer ku sameeyay arintaa isagoo la kaashanaya waxyaabaha laga qoray iyo filmaan muujinaya nolosha dhabta ah ee ka jirta Itobya. Wuxuu yidhi qoraaga;
Sheegashadan ay Ethiopia sheeganayso inuu dhaqaaalaha wadanku 10-kii sano ee oogu dambeeyay horumar lataaban karo gaadhay si,ay beesha caalamka ooga dhaadhiciyaan aritaas wax kasta oo suuragal ah way isku dayeen. Hadaba sheegashadan ay xukuumada Ethipian sheeganayso inuu wadanka horumar lataaban karo kajiro ayaa waxaa bilcakis kunoqday nolasha & xaalada ay kunoolyihiin bulshada wadankaas kudhaqan oo runtii ah mid aad loolayaabo. Magaalo madaxda Addis Ababa ayaa waxaa jidadka ama wadooyinka kunool dad kabadan 85,0000 oo qof waxaan meelaha qashinka lagu daadiyo cunto uraadsada oo kunool ilaa 25,0000 oo qof.